Nagu saabsan - Nanjing Beyou Exrusion Makiinado Co., Ltd.
Ruuxa ganacsiga: midnimo, halgan, run iyo hal -abuur.
Nanjing Beyou Extrusion Makiinado Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2017, kaas oo ah soo saare mashiin caag ah iyo mashiinno caag ah ， badiyaa ku hawlan mashiinka fidinta balaastigga oo ah udub -dhexaadka qalabka wax -ka -beddelka balaastigga iyo tiknoolajiyadda la xiriirta iyo goobta injineernimada ee cilmi -baarista iyo horumarinta iyo soo -saarka mashiinnada kaabayaasha ah.
Shirkaddayadu waxay leedahay tirooyin xuquuqda hantida aqooneed ee madaxbannaan, oo ay weheliso cilmi -baaristeeda tikniyoolajiyadda codsiyada iyo faa'iidooyinka horumarka iyo waayo -aragnimada wax -ku -oolka ah ee injineernimada, si joogto ah u soo bandhigta teknolojiyad cusub iyo alaabo cusub. Badeecadaha ugu waaweyni waa extruder-twin-screw, extruder-hal-fur, khadka wax-soo-saarka filimka PVB dhexdhexaad ah, khadka wax-soo-saarka heerkulbeegga muraayadda fiber-ka iyo nidaamka pelletizing biyaha hoostooda ee is-horumarsan kuwaas oo si ballaaran loogu isticmaalo noocyo kala duwan oo ah caag iyo qalab caag ah, sida midabaynta, isku-darka , buuxinta, xoojinta, qaawinta iyo dib -u -warshadaynta. Marka loo eego shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, waxaan ku siin karnaa xalalka ku habboon macaamiisha.
Aagga sagxadda waa 4000㎡ oo leh aqoon -isweydaarsiyo heer sare ah oo ka socda degmada Lishui. Waxaa jira shaqaale ka badan 30 hadda.
Shirkadeena waxay ku hogaamisaa warshadaha softiweer ama qalab. Hadda waxay leedahay koox R&D oo tayo sare leh iyo koox injineerro ah oo sannado badan ku hawlanaa barxadda mataanaha fur-furka. Waxaan ku qalabeynay qalab kala duwan oo farsameysan oo horumarsan iyo xarun tijaabo oo casri ah.
Beyou waxaa ka go'an cilmi-baarista iyo horumarinta wax-soo-saarka khayaanada, adeegga hal-joog！
Qaybaha asaasiga ah ee shirkadda iyo qaybaha waxaa ka baaraandegaya xarunta mashiinnada CNC ee saxda ah ee tallaabooyinka habka muhiimka ah, taasoo horseedaysa saxnaanta qaybaha iyo warshadaha qaybaha, iyo si waafaqsan heerarka caalamiga ah.
Ka dib marka alaabta ceyriin soo gasho warshadda, dhammaan habsocodyada wax -qabadku waxay ku jiraan gacanta gudaha oo la dhammaystiray.
Shirkadeena waxay leedahay qalab tijaabo oo gaar ah, oo lagu qalabeeyay qalab tijaabo oo kala duwan oo kala duwan, si loo hubiyo 100% tayada badeecada la xakameyn karo.
Shirkadeena si adag oo waafaqsan heerarka tayada iyo maaraynta CE, qorshaynta tayada oo dhammaystiran iyo maaraynta shaqada.